Fikajiana fanjifana kofehy fanjairana
Plastika faribolana sy loop
Polyester mifangaro nylon
H&L fanoherana ny lelafo
Ny fomba fikajiana ny habetsaky ny kofehy manjaitra. Miaraka amin'ny fiakaran'ny vidin'ny akora lamba, mirongatra koa ny vidin'ny kofehy fanjairana, indrindra ny kofehy fanjairana avo lenta. Na izany aza, ny fomba fikajiana ny habetsaky ny kofehy fanjairana ampiasain'ny orinasan-damba matetika dia tombanana amin'ny alàlan'ny traikefa amin'ny famokarana. Matetika ny ankamaroan'ny orinasa dia manadino be loatra ny kofehy manjaitra, manokatra ny famatsiana ary tsy mahatsapa ny sandan'ny fitantanana kofehy manjaitra.
1. Fikajiana fanjifana kofehy fanjairana
Ny fikajiana ny habetsaky ny kofehy manjaitra dia azo avy amin'ny fomba fanombanana mahazatra ampiasain'ny orinasa, izany hoe ny halavan'ny tsipika stitch dia refesina amin'ny alàlan'ny rindrambaiko CAD, ary ny halavany manontolo dia ampitomboina coefficient (amin'ny ankapobeny 2.5 ka hatramin'ny 3 heny ny halavan'ny stitch rehetra).
Sombin'ny fanjairana akanjo = ny totalin'ny fanjairana zaitra ny faritra rehetra amin'ny akanjo × (1 + tahan'ny fanoherana).
Ny fomba fanombanana dia tsy afaka mahazo marina ny habetsaky ny kofehy manjaitra. Misy fomba siantifika roa amin'ny fikajiana ny haben'ny kofehy zaitra:
1. Fomba fanabeazana
Ny fitsipiky ny fomba famolavolana dia ny fampiasana ny metatra lava halavan'ny geometrika matematika ho an'ny firafitry ny stitch, izany hoe ny fandinihana ny endrika géometrikan'ny coil mifamatotra amin'ny fitaovana fanjairana, ary ampiasao ny formula geometrika hikajiana ny fihinanana a tsipika loop.
Kajy ny halavan'ny kofehy stitch (ao anatin'izany ny halavan'ny stitch loop + ny haben'ny kofehy ampiasaina eo amin'ny fihaonan'ilay stitch), ary avy eo avadiho ho toy ny haben'ny zaitra isaky ny metatra ny zaitra, avy eo ampitomboina amin'ny halavan'ny stitch manontolo ny akanjo.
Ny fomba famolavolana dia mampifandray ireo anton-javatra toy ny hakitroky ny zaitra, ny hatevin'ny fitaovana manjaitra, ny isan'ny kofehy, ny sakany amin'ny sakany, ary ny halavan'ny zaitra. Noho izany, ny fomba famolavolana dia fomba marina kokoa, saingy somary sarotra ny mampiasa azy. Ny famaritana, ny fomba, ny teknika fanjairana, ny hatevin'ny fitaovana manjaitra (lamba volondavenona), ny isan'ny kofehy, ny hakitroky ny stitch sns ... dia samy hafa be, izay mitondra fanelingelenana be loatra amin'ny kajy, noho izany dia tsy ampiasain'ny orinasa izany.
2. Famaritana halavan'ny stitch-line
Ny tahan'ny halavan'ny kofehy, izany hoe ny refin'ny haben'ny zaitra amin'ny zaitra manjaitra amin'ny halavan'ny zaitra voavono. Ity refy ity dia azo faritana arakaraka ny tena famokarana na kajy arakaraka ny fomba famolavolana. Misy fomba fitsapana roa: ny fomba lava stitch sy ny fomba stitch halavany.
Fomba fanamafisana ny halavany: Alohan'ny manjaitra, refesio ny halavany sasany amin'ny tadin'ny pagoda ary asio marika ny loko. Aorian'ny fanjairana dia refeso ny isan'ny zaitra noforonina tamin'ity halavany ity mba hikajiana ny halavan'ny seam isaky ny metatra. Ny fanjifana ny tsipika.
Fanjairana fanjairana fanjairana: ampiasao aloha ny fitaovana manjaitra amin'ny hateviny isan-karazany mba hanjairana, avy eo manapaka ny faritra misy endrika zaitra tsara kokoa, manafoana tsara ireo zaitra, mandrefy ny halavany na mandanja ny lanjan'izy ireo, ary avy eo manisa ny isan'ny kofehy ampiasaina isaky ny metatra ny stitch (halavany na lanja).
2. Ny maha-zava-dehibe ny fikajiana marina ny doka:
(1) Ny habetsaky ny kofehy fanjairana dia zava-dehibe amin'ny orinasa manisa ny vidin'ny famokarana akanjo;
(2) Ny fikajiana ny habetsaky ny kofehy fanjairana ampiasaina dia afaka mampihena ny fako sy ny backlog an'ny seza. Ny fampihenana ny habetsaky ny kofehy manjaitra dia afaka mamonjy ny faritry ny firaketana an-tsoratry ny orinasa ary mampihena ny tsindry amin'ny lisitra, amin'izay hampihena ny vidin'ny famokarana ary hampitombo ny tombom-barotra;
(3) Ny fanatanterahana ny fanombanana ny fanjifana kofehy manjaitra dia afaka manatsara ny fahalalan'ny mpiasa ny fikajiana sy ny kalitaon'ny fanjairana;
(4) Amin'ny fikajiana ny habetsaky ny kofehy manjaitra, ny mpiasa dia azo ampahatsiahivina fa hanova ny kofehy ara-potoana. Rehefa tsy avela amin'ny zaitra misokatra toy ny pataloha jeans ny zaitra, ny habetsaky ny kofehy ampiasaina dia tokony hikajiana tsara mba hampihenana ny ambin'ireo zaitra vokatry ny zaitra tsy ampy, ka hanatsarana ny famokarana;
Satria ny "tahan'ny halavan'ny stitch-to-line" dia tsotra ihany hanisana ny habetsaky ny kofehy manjaitra, ary marina ny valin'ny kajy, dia be mpampiasa amin'ny mpanamboatra akanjo.
3. Ireo singa miantraika amin'ny habetsaky ny kofehy manjaitra
Ny habetsaky ny fanjifana kofehy manjaitra dia tsy mifandray akaiky amin'ny halavan'ny stitch fotsiny, fa mifandray akaiky koa amin'ireo antony toy ny hateviny sy ny fihodinan'ny kofehy fanjairana, ny firafitra sy ny hatevin'ny lamba ary ny hakitroky ny zaitra mandritra ny fanjairana. .
Na izany aza, ny tena fiovana sy ny fahafaha-manao dia mahatonga ny valin'ny fikajiana ny kofehy manjaitra manana fiviliana lehibe. Ireo antony lehibe hafa mitaona ny:
1. Ny fahamendrehan'ny lamba sy ny kofehy: ny fanjairana sy ny zaitra dia manana haben'ny hazavana. Ny lehibe kokoa ny deformation elastika, ny fiantraikany lehibe kokoa amin'ny fikajiana ny haben'ny suture. Mba hahatonga ny valin'ny kajy ho marina kokoa, dia ilaina ny manampy coefficients fanitsiana ho an'ny fanitsiana ny lamba matevina sy manify volondavenona miaraka amin'ny rafitra fandaminana manokana sy ny zaitra ny fitaovana manokana.
2. Output: Raha misy habetsahan'ny famokarana be dia be, rehefa mihombo tsikelikely ny fahaizan'ny mpiasa dia hihena ny tahan'ny fatiantoka.
3. Famaranana: Ny fanasana sy ny fanosahana lamba na fitafiana dia hiteraka olana amin'ny fihenan'ny akanjo, izay mila ampitomboina na ahena tsara.
4. Mpiasa: Eo am-panaovana ny zaitra, noho ny fahazarana miasa isan-karazany an'ny mpiasa dia miteraka ny lesoka sy ny fanjifan'ny olombelona. Ny fanjifana dia voafaritra arakaraka ny satan'ny teknika sy ny tena zava-niainan'ny ozinina, ary io fako io dia azo ahena amin'ny alàlan'ny torolàlana momba ny asa.
Mihombo hatrany ny fifaninanana eo amin'ny sehatry ny akanjo. Ny orinasa dia tokony hanana fomba fikajiana kofehy fanjairana mety hanampy amin'ny fitantanana ny kofehy fanjairana ary hanomezana referansa ny fitehirizana ny vidin'ny famokarana.
Fotoana fandefasana: Apr-01-2021
Ny fiarovana ny tontolo iainana voajanahary dia mbola ...
Fikajiana fanjairana kofehy manjaitra ...
Famokarana sy ny varotra satan'i China̵ ...